Ciudadanos na-atụ aro mgbanwe na NHP iji mee mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Ciudadanos na-atụ aro mgbanwe na PHN iji mee mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe
N'iburu ọnọdụ ụkọ mmiri na Spain na-ata ahụhụ, otu ndị omeiwu nke ensmụ amaala enyela iwu na-enweghị iwu (NLP) iji gbanwee ma gbanwee National Hydrological Plan maka mgbanwe ihu igwe. Mgbanwe ndị a nwere usoro sara mbara nke isonye mmadụ.
Kedụ ka ịchọrọ isi dozigharị atụmatụ banyere mmiri na mmiri maka ọnọdụ ajọ ọkọchị nke mgbanwe ihu igwe kpatara?
1 Mmegharị maka mgbanwe ihu igwe na nchekwa mmiri
2 Mpaghara ọrụ
Mmegharị maka mgbanwe ihu igwe na nchekwa mmiri
Ọ dị ezigbo mkpa ịkwado nchekwa mmiri nke mba ahụ dum. N'iche ọnọdụ ọnọdụ mgbanwe ihu igwe na-abawanye na mmụba na oke ọkọchị (anyị ahụlarịrị na 2017 abụrụla afọ nke abụọ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ kemgbe 1965), Ciudadanos na-atụ aro usoro ntuziaka iji gbanwee Hydrological Plan Mba.
Onye ọnụ na-ekwuchitere maka arụmụka ahụ na the Commission Change Climate, Melisa Rodríguez, O meela ka obi sie anyị ike na okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ ihe iyi egwu nke a ga-elebara anya, ebe anyị na-ahụrịrị nsonaazụ ya. Iji mee ihe maka abamuru nke ụmụ amaala niile nke Spain, ọ dị mkpa ịmepụta ma mepụta usoro mmeghari ohuru maka iwu afọ ochie banyere mmiri na mba ahụ.
Ekwesiri ime ka ndi mmadu megharia mgbanwe mgbanwe ihu igwe na akuku abuo: obere oge, site na 2030, na ogologo oge, site na 2050.
Na mgbakwunye na ịhụ na nchekwa mmiri nke mba ahụ, a ghaghi ime ya na ego onu. Omume ga-emeri ọnọdụ ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe kpatara, ọ bụghị naanị site na oké ọkọchị, mana site na ụba okpomọkụ, oke mmiri ozuzo na mmụba na oke ọkụ na oke ọhịa.
NLP anaghị atụ aro ihe a kapịrị ọnụ, mana ọ na-eweta usoro iri nke ime ihe, otu n'ime ha bụ ịkọwapụta mmiri nke mmiri na a onodu nke climatological ejighị ihe n'aka; mmezi na nchekwa nke ọrụ hydraulic na nrụnye ọrụ; nnu nnu; ụgwọ nke mmiri ma ọ bụ mmekorita ọha na eze na mpaghara mmiri.
Akụkụ nke Ciudadanos chọrọ ka a gbanwee atụmatụ Hydrological bụ ihe ndị a:
Bara uru mmiri dị ka ihe dị mkpa, ụkọ na ọhaneze na ọdịdị akụ na ụba ya, site na njirimara, nchoputa na nyocha nke nnweta na nsogbu ndị anyị ga-eche ihu na mgbanwe ihu igwe.
Redesign ngwaọrụ maka nchịkwa na njikwa nke ọma na mmiri na ọnọdụ nke enweghị ihu igwe. Nke a na - eweta ọtụtụ nsogbu gbasara mmekọrịta dị n’etiti mmiri na ngalaba gọọmentị nke obodo ọ bụla kwụụrụ onwe ya.
Gbanwee ihe ndozi niile ebe a na-echekwa ma na-ebuga mmiri n'okpuru ọnọdụ chọrọ mgbanwe nke ihu igwe. A na-achịkọta omume ndị dịka ịhazigharị ihe nrụpụta na ịgbanwe ọrụ nke ụfọdụ ọkwa.
Debe ma chekwaa ọrụ na akụrụngwa na ọrụ, n'ihe metụtara nchekwa na nkwụsi ike nke usoro hydraulic. Nlebara anya pụrụ iche na mmiri (ala, eutrophication na nchekwa nke dams) na usoro nkesa (nchịkwa ọnwụ).
Meewanye mmepụta nke mmiri na-abụghị nke mmiri na Spain, dị ka nke sitere na ịkpụcha mmiri. Ndozi na nkpuru na ugwo nke ichoputa mmiri. Nkwalite nke ojiji nke mmiri mkpofu eweghachitere maka ojiji ndị ọzọ na-abụghị oriri mmadụ.
La mmekorita ndi mmadu na ndi mmadu na mpaghara mmiri. Ọrụ ya na ndozi arụmọrụ nke akụrụngwa hydraulic, ọrụ ya na njikwa nke ojiji. Iwu iwu. Mmiri, mmepe na ihe nlereanya akụ na ụba.
Mee ka njikwa mmiri nke obodo mepere emepe.
Dezie ego na ọnụahịa mmiri.
Meewanye ihe ọhụrụ na mmepe nke teknụzụ nke na-eme ka usoro mmiri na mmiri dịkwuo mma, ijikwa ma melite aquifers site na iji ihe ọkụkụ ka mma.
Ọgbọ eletrik site na mmiri echekwara iji tinye ya na mgbanwe ike Spanish.
Na ngwaọrụ ndị a niile, Ciudadanos nwere olile anya na ọ ga - enwe ike imeziwanye National Hydrological Plan n'agbanyeghị mgbanwe ihu igwe, ebe ọ na - adịwanye egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ciudadanos na-atụ aro mgbanwe na PHN iji mee mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe
Kedụ ka ị ga - esi nye aka igbochi mgbanwe ihu igwe?
Maple syrup nwere ike ịbụ onye ọhụụ nke mgbanwe ihu igwe